Xogta Koowaad ee Guusha Bilawga Usbuuca | Martech Zone
Axad, Nofeembar, 14, 2010 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Ma jirin cid laga badiyay Bilowga Isbuuca halkan Indianapolis. Waxay ahayd xog ururin la yaab leh oo fikrado fantastik ah - qaar badan oo ka mid ah kuwaas oo horeyba loogu hawlgalay qaar ka mid ah noocyada halista ah. Kudos ayaa tagaya Ball Lorraine si iskudhaf ah isugu dubbarida dhacdadan cajiibka ah - iyo sidoo kale Park Purdue Research Park - oo ah goob cajaa'ib leh oo lagu qabto. Ku guuleystaha wuxuu ahaa Stats Squared, aalad loogu talagalay kormeerka saameynta ay Twitter ku leedahay boggaaga adoo adeegsanaya xiriiriyeyaal.
Dhibaatada, taas oo aan laga qoray, ayaa ah in gabi ahaan ganacsiyada oo dhami ay dhayalsadaan taraafikada tixraaca ee ay ka helaan Twitterka maxaa yeelay waxay si fudud u eegaan meelaha loola jeedo ee Twitter.com. Twitter.com kaliya waxay ku saabsan tahay 18% dhammaan taraafikada Twitter.
Waxaa jira xalal qaar - sida adeegsiga koodhadhka ololaha markaad gaabinayso oo aad qaybineyso URL-yadaada… laakiin taasi waxay kaliya u shaqeysaa iskuxirayaasha aad qaybi. Xalka kale ayaa ah in mar labaad la isticmaalo Bit.ly Pro,, oo kaliya la cabbiro xiriiriyeyaal taas aad qaybi. Shirkadda Bit.ly ayaa kuu oggolaaneysa inaad kormeerto wax kasta oo ka mid ah URL-yadaaga oo laga gaabiyey meel kasta oo Bit.ly. Laakiin qof kastaa ma isticmaalo Bit.ly.
Sigh… soo socda ayaa adeegsanaysa aalad sida Backtweets oo u dhiganta gaadhitaanka xiriir kasta oo aad halkaas dhigtay, laakiin wali kuuma siinayo wax tirakoob ah oo ku saabsan tirada booqashooyinka dhabta ah ee soo gaadhay goobtaada.
Xalka saxda ah, dabcan, wuxuu noqon lahaa Twitter si loogu oggolaado ganacsiyada inay ku daraan lambarradooda ololaha u gaarka ah aagagga ay iyagu leeyihiin. Habkaas, wakhti kasta oo iskuxirka qofkasta uu dhigo boggaaga, nambarka ololaha ayaa si otomaatig ah loogu lifaaqay oo dhammaan falanqeeyayaashu waxay awoodi doonaan inay iska diiwaangeliyaan macluumaadka meesha booqashadu ka timid. Waxaase layaab leh, Twitter wuxuu sidan ku sameeyaa xiriiro badan oo u gaar ah - sida kuwa ay ku qaybiyaan E-mailka.
Stats squared waxay rajeyneysaa inay gacan ka geysato yareynta dhibaatadan… ugu yaraan adoo cabbiraya saameynta ay kugu leedahay tweets-gaaga bartaada. Stats Squared wuxuu isku daraa websaydhkaaga Twitter iyo Bit.ly si loogu soo celiyo istaatiitikada boggaaga. In kastoo ay u muuqato oo keliya inay la shaqeyneyso Bit.ly oo aaney aheyn Bit.ly Pro… ie. Cinwaanadeena URL-yada waxaa loo soo gaabiyey sida mkt.gs laakiin uma muuqato inay isdiiwaangelinayaan.
Waxaan hayaa liis rabitaan ah Stats squared:
Tiir midig oo go'an kaas oo wadar ahaan ah, oo bixinaya Tweets-ka ugu sarreeya iyo sicirka gujinta-xigta (CTRs) maalin, toddobaad iyo bil.
Awoodda lagu arki karo waddada qaybinta, laga soo bilaabo tweet-kii asalka ahaa ee loogu talagalay dadka dib u daabacay, iyo inta jeer ee xiriidhada la riixay.
Awoodda aad u leedahay inaad aragto dadka aad xiriirka la leedahay inta badan iyo, haddii ay suurogal tahay, taraafikada ay kuu socdaan.
Waxay ahayd wax lagu farxo in lagu jiro guddiga garsooraha ee bilowga oo ka yimid fikrad illaa xukun hal usbuuc dhammaad ah. Stats squared wuxuu leeyahay xoogaa nadiifin ah oo guriga lagu sameeyo iyo horumar dheeri ah, laakiin waa aasaas weyn oo isla sanduuqa ka baxsan. Si fiican ayaa loo dhigay, muuqaal ahaan rafcaan, oo durba u muuqda inuu si fiican u shaqeynayo.